GSDM-EFTA: Nivoaka ny teknisiana misahana manokana agroécologie - ewa.mg
GSDM-EFTA: Nivoaka ny teknisiana misahana manokana agroécologie
News - GSDM-EFTA: Nivoaka ny teknisiana misahana manokana agroécologie
Tsy ampy ireo teknisiana ara-pamokarana hanolo-tsaina ny tantsaha hiatrika ny fiovaovan’ny toetr’andro. Izany indrindra no antom-pisian’ireo « conseillers spécialisés en agriculture de conservation et agroécologie» (AE/AC). Nivoaka tamin’ny fomba ofisialy ny 19 aprily 2019 teny amin’ny sekoly fampiofanana teknisiana ara-pamokarana (EFTA) Ambatobe Antananarivo ny andiany voalohany amin’ireto teknisiana misahana manokana ny fambolena maharitra ireto. Avy amin’ny EFTA Analamalotra Toamasina sy Iboaka Fianarantsoa izy 30 mianadahy ireo ary nisalotra ny anarana “natiora” ny andiany avy ao Toamasina. “Misantatra” kosa ny avy any Fianarantsoa. Raha ny fanazavan’ny talen-tsekolin’ny EFTA Analamalotra Toamasina, Rakotomalala Nicole dia nanaraka ny lasi-piofanana nasionaly sy “approche par les compétence” (APC) ny fiofanana nataon’ireo mpiofana nandritra ny herintaona. Nandalo fanazaran’asa ihany koa izy ireo. Noho izany dia vonona ny hiatrika ny asa avy hatrany. Nampiavaka ireto andiany voalohany ireto ny finiavan’ireo mpiofana sasantsany nandao ny asany teo aloha noho fitiavana te hanasoa ny tantsaha manoloana ny fiovaovan’ny toetr’andro.
Vokatry ny fiarahamiasan’ny ministeran’ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono (MAEP) sy ny EFTA ary ny GSDM, matihanina manokana momba ny fambolena maharitra (agroécologie) ity fampiofanana teknisiana AE/AC ity. Tetikasa nanomboka ny taona 2016 ka hatramin’ny 2020 ny fampiofanana teknisiana misahana manokana ny fambolena maharitra. Nambaran’ny tale mpanatanteraky ny GSDM, Rakotondramanana fa dingana maro no nolalovana talohany nahatongavana tamin’izao famoahana teknisiana andiany voalohany izao. Tamin’ny alalan’ny tetikasa PAPAM, vatsian’ny AFD (Agence Française de Développement) niampy ny fanampian’ny MAEP, ny FOFIFA, ny oniversite, ONG sy tetikasa maro, mpampianatra-mpampiofana 18 amin’ireo ivon-toeram-pampiofanana momba ny famokarana sy ny tontolo ambanivohitra (CEFAR) no nofanin’ny GSDM. Nilaza ihany koa Rakotondramanana fa tamin’ny taona 2014 no nandrafetana ny lasi-pampiofanana nahafahana nampiofana ireto mpianatra ireto. Hanampy ny tantsaha, ny tetikasa hiatrika ny voka-dratsy ateraky ny fiovaovan’ny toetr’andro ireto teknisiana ireto. Sady mamokatra no mitazona ny tsiron’ny tany no tombontsoa ho azy amin’izany, hoy ny tale mpanatanteraky ny GSDM. Ankoatra izany, miady sy misoroka ny voka-dratsy ateraky fiovaovan’ny toetry ny andro ny fomba fambolena maharitra.
Sekolim-panjakana eo ambany fiahian’ny ny MAEP ny EFTA. Ahitana azy avokoa ny renivohi-paritany enina eto Madagasikara. Amin’ny alalan’ny fifaninana no idirana ao amin’ny sekoly. Anjaran’ny EFTA Ambatobe Antananarivo sy Bezaha Toliara indray no hisitrika ny fampiofanana teknisiana AE/AC ho an’ny taom-pianarana 2018-2019.
Cet article GSDM-EFTA: Nivoaka ny teknisiana misahana manokana agroécologie est apparu en premier sur déliremadagascar.
Hetsika hanoherana ny asan-jiolahy – Toamasina: nilaza tsy hitsitsy amin’ny mpanao ratsy ny zandary
Manoloana ny firongatry ny tsy fandriampahalemana ao Toamasina, hanao hetsika lehibe ho fanoherana ny asan-jiolahy ny zandary. Handrakotra ny faritra maro izy ireo, ary nilaza tsy hitsitsy amin’ireo mihevitra mbola hanohy ny asa ratsiny.“Tsy azo ekena intsony ny zava-misy ka hiakatra eto an-dAenivohitry ny faritra Atsinanana indray ny zandary hanao hetsika hanoherana ny asan-jiolahy. Horakofanay zandary ny renivohitr’i Toamasina manomboka anio (omaly io) ary tsy hitsitsy amin’izay mihevitra ny hanohy ny asa ratsiny ny zandary”, hoy ny kaomandin’ny vondron-tobim-pileovan’ny zandarimaria Atsinanana (tamin’ny fiteny hentitra), ny Kly Ranaivoarison Théodule, omaly nandritra ny valandresaka ho an’ny mpanao gazety, manoloana ny firongatry ny tsy fandriampahalemana ao Toamasina. Niangavy fiaraha-miasa manokana amin’ireo sefom-pokontany sy izay manana loharanom-baovao eny anivon’ny fiarahamonina hiara-hiasa amin’ny zandary ity manamboninahitra ambony ity satria araka ny nambarany, “mipetraka eny anivontsika eny ihany ny jiolahy ary eo anelanelan’ny amin’ny 11 ora alina ka hatramin’ny 3 ora maraina ny fotoana fanafihan’ny jiolahy”s.Miakatra ny tahan’ny tsy fandriampahalemana…Miaiky ny rehetra fa niakatra izaitsizy ny tahan’ny tsy fandriampahalemana ao an-drenivohitr’i Toamasina raha efa nilamindamina kosa ny manodidina an’i Toamasina II izay nosahanin’ny zandary noho ny fizarana faritra nisy teo amin’ny samy mpitandro filaminana. Efa novatsin’ny fitondrana foibe fiara tsy mataho-dalana ny zandary ka hampiasaina amin’ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany izany, araka ny fanazavan’ny Kly Ranaivoarison Théodule hatrany. Niantso ireo sefom-pokontany rehetra hiaraka hametraka paikady entina hikarohana sy hisamborana ireo jiolahy ny Kly Ranaivoarison Théodule, ny alatsinainy 29 jolay 2019 ho avy izao. Tsy ireo sefom-pokontany ihany no antsoiny fa na izay olona tsara sitrapo vonona ny hiara-hiasa amin’ny zandary, raisina hiaraka hihaona hametraka drafitra matipaika hiadiana amin’ity tsy fandriampahalemana miseholany ao Toamasina ity.Sajo sy Jean ClaudeL’article Hetsika hanoherana ny asan-jiolahy – Toamasina: nilaza tsy hitsitsy amin’ny mpanao ratsy ny zandary a été récupéré chez Newsmada.
Kitra eran-tany – Filaharan’ny Fifa: faha-96 maneran-tany ny Barean’i Madagasikara
Namoaka ny filaharan’ireo ekipa mivondrona ao aminy ny Federasiona iraisam-pirenen’ny baolina kitra (Fifa), omaly. Tamin’izany ny nahitana fa tafiditra ao anatin’ny “Top 100 mondial” ny Barean’i Madagasikara. Faha-96 maneran-tany mantsy i Madagasikara, amin’izao fotoana izao, izay manana isa 1251. Nahavita dingan-dava ny Barean’i Madagasikara satria tany amin’ny faha-108, talohan’ny nanombohan’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika “Can 2019”, notanterahina tany Egypta.Nahatonga izao fisondrotana goavana izao ny zava-bitany tany amin’izany fifaninanana afrikanina izany. Any aorian’i Madagasikara avokoa i Niger sy i Etiopia, iray vondrona amin’ny Barea, eo amin’ny fifanintsanana ho an’ny “Can 2021”. Raha ho an’ny filaharana eto Afrika indray, eo amin’ny faha-21 ny Barean’i Madagasikara. Mbola mitarika eo amin’ny laharana voalohany eto Afrika ny Lionan’i Teranga, avy any Sénégal, eny fa na nisy aza ny fahareseny teo amin’ny famaranana ny “Can 2019”. Any amin’ny fahefatra kosa ny Fennecs Alzerria, tompondakan’i Afrika 2019. Faharoa i Tonizia ary fahatelo ny Voromaherin’i Nizeria. Fahadimy ry zareo Maraokanina.Mbola voalohany maneran-tany kosa i Belzika, manana isa 1746. Nihoaran’i Brezila kosa i Frantsa, nidina eo amin’ny laharana fahatelo. Tsy niova kosa fa mbola eo amin’ny fahefatra hatrany i Angletera. Niakatra eo amin’ny fahadimy i Orogay, izay nisongona an’i Portugal, mipetraka eo amin’ny fahenina. Any amin’ny fahasivy ry zareo Espaniola ary fahafolo i Arzantina. Tena nivarina be kosa ry zareo Alemà, lasa any amin’ny faha-15, arahin’i Italia sy i Pays-Bas, izay samy eo amin’ny faha-16. Tompondaka L’article Kitra eran-tany – Filaharan’ny Fifa: faha-96 maneran-tany ny Barean’i Madagasikara a été récupéré chez Newsmada.
ONG Bel’Avenir: niverina nisokatra ny foibe ho an’ny vehivavy
Noho ny fanampian’ny Fundación Barceló, niverina nisokatra indray ny foibe mpandray sy mpikarakara ny vehivavy (Caif) an’ny fikambanana Bel’Avenir, any Toliara, nanomboka tamin’iny volana jona iny. Miisa 42 ny renim-pianakaviana efa nisoratra anarana ka hiatrika fiofanana araka asa, mandritra ny 12 volana.Tanjon’ny foibe ny hanohana ny vehivavy amin’ny fiainany andavanandro sy hanome azy ny fahalalana ahafahany mivelatra sy mampivelatra ny asa fidiram-bolany. Kendrena manokana amin’izany ireo renim-pianakaviana sahirana ara-pivelomana, indrindra ireo ao amin’ny fokontany Ankalika.Anisan’ny fototra amin’ny fampandrosoana ara-toekaren’ny isan-tokantrano ny fanomezana sehatra mahaleotena ny vehivavy eo amin’ny lafiny fihariana. Resy lahatra amin’izany ny fikambanana Bel’Avenir ka namolavola fandaharanasa, izay mifantoka bebe kokoa amin’ny fanatsarana ny fahalalana sy ny fahaizan’ny vehivavy. Izay ny antom-pisian’ny Caif, niorina tamin’ny taona 2017.Ny 25 jona teo, noho ny fanamarihana ny fetim-pirenena, nitsidika ity foibe ho an’ny vehivavy ity ny filohan’ny fikambanana, Volanjary Hélène, ary nizara fitafiana sy harendrina ho an’ireo ankizy. Nahazo ny anjarany ihany koa ireo tera-bao.Landy R.L’article ONG Bel’Avenir: niverina nisokatra ny foibe ho an’ny vehivavy a été récupéré chez Newsmada.
Fahatrarana mpaka an-keriny
Ataon’ny zandary andrimaso ireo lehilahy roa voasambotra voarohirohy tamin’ny fakàna an-keriny an’ilay lehilahy Karàna lehibena orinasa, tany Toamasina, andro vitsivitsy lasa izay. Mitohy ny fanadihadiana fikarohana ny mety ho naman’izy ireo. Tsiahivina fa efa votsotra, tamin’ny afak’omaly hariva, ilay nalaina an-keriny. L’article Fahatrarana mpaka an-keriny est apparu en premier sur AoRaha.
Ikalamavony: lehilahy hita faty novonoina tamin’ny fomba feno habibiana
Nandriaka ny ra! Hita faty novonoina tamin’ny fomba feno habibiana tao amin’ny fokontany Matsiatsa, Ikalamavony, ny raim-pianakaviana iray 42 taona, ny asabotsy lasa teo. Araka ny fampitam-baovao avy any an-toerana, tsy lavitra ny EPP ao Tanambao Avaratra amin’ny lalana mihazo an’i Malainkoafara ny nahitana ny fatiny. Fantatra fa teny an-dalana hody no nisy namono tamin’ny fomba feno habibiana satria nahitana dian’antsy teo amin’ny lohany. Voalaza fa nisy namono ny zanak’ity raim-pianakaviana ity, ny 10 jolay 2019. Tovolahy tao an-tanàna ihany no voalaza fa tompon’antoka tamin’izany ka niafara tamin’ny tsindrona antsy izany noho ny resaka toaka. Nitondra ny raharaha teny amin’ny zandarimariam-pirenena ao Ikalamavony ilay raim-pianakaviana manan-janaka maty. Nosamborin’ny fokonolona avy hatrany, andro vitsy taorian’ity vonoan’olona ity, ilay tovolahy nahavanon-doza. Natolotra ny zandary ilay jiolahy. Nandeha ny famotorana ka nametraka fitoriana koa ny raiben’ilay jiolahy voarohirohy tamin’ity raharaha vonoan’olona ity ho setrin’ny fitorian’ny rain’ny maty. Nifandrohirohy teny amin’ny fitsarana ny raharaha ka izao niafara tamin’ny fahafatesan’ilay raim-pianakaviana izao. Andrasana ny tohin’ity raharaha ity.J.C L’article Ikalamavony: lehilahy hita faty novonoina tamin’ny fomba feno habibiana a été récupéré chez Newsmada.
Fifidianana ben’ny Tanàna: hanapa-kevitra ato ho ato ny fitondrana
Mby aiza ny fanatanterahana fifidianana ben’ny Tanàna sy ny fifidianana mpanolotsain’ny Tanàna? Mbola mahabe adihevitra. Hanapa-kevitra ato ho ato ny fitondrana“Ny zavatra hataontsika, hisy fanapahan-kevitra amin’ity herinandro ity na amin’ny herinandro ho avy. Tsy maintsy manapa-kevitra amin’ny filankevitry ny minisitra momba izay fotoana tokony hanaovana ny fifidianana ben’ny Tanàna izay.” Io no nambaran’ny filoha Rajoelina Andry teny Anosy, omaly, momba ny fifidianana ben’ny Tanàna sy ny mpanolotsain’ny Tanàna. Mila hanontaniana aloha ny antoko nilaza fa tsy tokony hatao amin’ity taona ity ny fifidianana. Satria nisy antoko nilaza fa raha hatao amin’ity taona ity io fifidianana ben’ny Tanàna io, tsy handray anjara ry zareo.Hanontaniana koa ny Ceni ny amin’ny fahitany azy: madio tokoa ve ny lisi-pifidianana?“Miroso amin’ny fifidianana tokony hatao isika, rehefa madio ny lisi-pifidianana ary vonona hiroso amin’izany isika”, hoy izy. Tsy misy ny olana na natao amin’ity taona ity io, na amin’ny taona ho avy. Rehefa mifanaraka ny rehetra hoe: miroso rehefa hiroso, aleo ny vahoaka no hisafidy. Hatao fifidianana rehefa izay no hifanarahan’ny besinimaro. Mino izy fa vonona avokoa ny antoko rehetra hiatrika an’izany.Ara-dalàna ny hatao.Zavatra manara-dalàna no tokony hatao, araka ny nambarany. Ny Ceni no mamaritra ny daty tokony hanaovana ny fifidianana, ary iaraha-midinika amin’ny minisitry ny Atitany. Toy ny rehetra ihany izy, nahare fa misy antoko nilaza ny mbola tsy tokony hanaovana ny fifidianana ben’ny Tanàna aloha, fa mila jerena ny lisi-pifidianana. Izay no ataon’ny Ceni: mijery ny lisi-pifidianana.Vokany, tsy fantatra intsony hoe: hatao ve ny fifidianana sa tsia? “Izao ny zavatra mampihomehy sy mahagaga eto amintsika: zatra manohitra hatrany ny zava-mitranga isika”, hoy ihany izy. Rehefa milaza isika hoe tokony hiroso, miteny ny sasany hoe mijanona aloha fa aza mbola miroso.Tsy misy eritreritra hanendry PDS“Vaovao tsy marina sy tsy mitombina izany, satria tsy misy manana eritreritra hanolo PDS ny ben’ny Tanàna”, hoy izy momba ny fanendrena PDS. Anjaran’ny vahoaka ny mijery raha nahavita ny asany na tsia ny ben’ny Tanàna tao anatin’ny efa-taona nitantanany. Anjaran’ny vahoaka koa ny manapaka ny amin’izay amin’ny fifidianana: iza ny ben’ny Tanàna tena mahavita azy, tena afa-kampandroso ny firenena?R.Nd.L’article Fifidianana ben’ny Tanàna: hanapa-kevitra ato ho ato ny fitondrana a été récupéré chez Newsmada.
Hanorina fasana vaovao miisa 96
Anisan’ny dingana hanajan’ny Base Toliara koa ny fifanarahana amin’ny fokonolona, hamindrana ny fasana tafiditra ao anatin’ny faritra iasan’ny orinasa. Miisa 96 izy ireo any amin’ny kaominina dimy. Nampifanarahana ny lalàna nentin-drazana malagasy sy ny lalàna velona ny fomba sy kolontsaina any an-toerana. Ao anatin’ny vaomiera misahana izany ny solontenam-pokonolona, ny vondrom-paritra itsinjaram-pahefana, ny fitantanam-paritry ny Kolontsaina sy ny vakoka, ny Harena an-kibon’ny tany, ny Fanajariana ny tany sy ny fananan-tany, ny Fahasalamana, ny distrika Toliara II, ny olobe, ny mpikaroka ary ny orinasa Base Toliara.Hanorenana fasana vaovao ny tompom-pasana, sady sandaina vola. Miisa 16 ny fasana haorina voalohany ary ho vita amin’ny septambra 2019 ary hitohy indray ho an’ny andiany manaraka.L’article Hanorina fasana vaovao miisa 96 a été récupéré chez Newsmada.
Ivontoerana Safidy: “Mila hajaina ny fe-potoam-piasan’ny ben’ny Tanàna”
Ho tapitra ny fe-potoam-piasan’ireo ben’ny Tanàna. Hisy sa tsia ny fifidianana? “Tokony hohajaina ny fe-potoam-piasan’n y ben’ny Tanàna”, hoy ny Ivon-toerana Safidy. “Fanairana ny mpitondra amin’ny fifidianana ben’ny Tanàna, miteny izahay hoe: hajao ilay fe-potoana fifandimbiasam-pahefana. Hotanterahina amin’ity taona ity ihany ny fifidianana ben’ny Tanàna.”Izay ny fanehoan-kevitry ny eo anivon’ny Ivontoerana Safidy amin’ny alalan’ny mpitondra teniny, Razanamahefa Désirée Marie Stella, momba ny fanemorana ny fifidianana ben’ny Tanàna sy ny fifidianana mpanolotsain’ny Tanàna. Tsy ampy intsony ny 90 fihaikana mpifidy alohan’ny fifidianana, raha hatao ny 28 oktobra araka ny volavolana tetiandrom-pifidianana naroson’ny Ceni.“Raha hatao amin’ny tapatapaky ny volana novambra izany, mbola manam-potoana isika. Na hatao amin’ny voalohandohan’ny volana desambra aza, mbola manana fotoana isika”, hoy izy. Ny hanaovana ny fifidianana amin’ny 28 oktobra no tsy ampy intsony ny fotoana.Tokony hatao ny fifidiananaTapitra ny volana septambra ny fe-potoam-piasan’ireo ben’ny Tanàna, tokony hatao ny fifidianana hisian’ny fifandimbiasam-pahefana ara-dalàna. Tsy manaraka lalàna intsony, raha hatao amin’ny herintaona izany.“Ny tena ahiahinay, raha sanatria ka PDS no hapetraka ho solon’ny ben’ny Tanàna. Olona tendrena ny PDS, izay tsy maintsy manatanteraka ny tenin’izay manendry azy”, hoy ihany izy.Nefa raha tsy maintsy hahemotra ny fifidianana, hiitatra ny fe-potoan’ireo ben’ny Tanàna, izay efa miomana ny hiala aorian’ny volana septambra. Nefa mbola ho eo hatrany izy ireo mandra-pahatonga ny fotoana mahametimety ny fanjakana.R.Nd. L’article Ivontoerana Safidy: “Mila hajaina ny fe-potoam-piasan’ny ben’ny Tanàna” a été récupéré chez Newsmada.
Namoy ny ainy teny amin’ny hopitaly fotoana vitsy taorian’ny nisehoan’ny loza ny lehilahy iray, 27 taona, tratry ny lozam-pifamoivoizana tany Mahajanga, afak’omaly antoandro. Mpiavy ity namoy ny ainy ary tsy manana fianakaviana ao Mahajanga. Ny mpiara-monina aminy no nandray an-tanana ny fikarakarana ny razana eo am-piandrasana ny havany avy any Fianarantsoa. L’article Matin’ny lozam-pifamoivoizana est apparu en premier sur AoRaha.
Kitra – Fifidianana filohan’ny federasiona (FMF): vita ny antsapaka ho an’ireo kandidà 5 mirahalahy
Fantatra ny laharan’ireo kandidà dimy mirahalahy, hifaninanana ho filohan’ny federasiona malagasin’ny baolina kitra (FMF). Miandry ny fotoana hanatontosana, ny fifidianana sisa ny rehetra.Tontosa, tetsy amin’ny foibe toeran’ny federasiona malagasin’ny baolina kitra, tetsy Isoraka, omaly, ny antsapaka amin’ny laharan’ireo kandidà dimy mirahalahy, ao anatin’ny biletà tokana, amin’ny fifidianana izay ho filohan’ny federasiona. Nialoha izany, notsiahivin’ny filohan’ny “comité de normalisation”, Rtoa, Atallah Beatrice fa tsy azo raisina ny fitoriana nataon’ny kandidà Rabekoto Raoul Arizaka Romain, mahakasika ireo mpifaninana aminy, misahana andraikitra politika, izay voalaza ao anatin’ny fehezan-dalàna 13 sy 14 amin’ny lalàm-pitondran-tenan’ny fifa. Rehefa nodinihina hoy izy dia tsy azo raisina ilay izy satria tsy mbola filohan’ny federasiona ireo olona voalaza ireo. Efa nalefa any amin’ny federasiona iraisam-pirenena, ny fanapahan-kevitra noraisin’ny “comité de normalisation”, mahakasika izany.Kandidà iray ihany no tonga nanatrika ity antsapaka ity dia i Mohamad Abdillah Abdou, fa solontena kosa ny an’ireo kandidà telo hafa. Tsy nisy kosa ny an’Andriamiasasoa Doda. Izy ireo no nanao ny antsapaka, nanoloana ny mpanao gazety. Laharana voalohany, Rabekoto Raoul Arizaka Romain. Faharoa, Mohamad Abdillah Abdou ary fahatelo, Andriamiasasoa Doda. Fahefatra, Rasoamaromaka Herilalaina ary fahadimy, Rakotomamonjy Neypatraiky. Toy io filaharany io ihany koa ny fandraisam-pitenenany, ao amin’ny onjam-peo sy ny fahitalavi-pirenena (RNM sy TVM), amin’ny fanolorany, ny fandaharanasany. Hanana 5 mn avy izy ireo, manomboka ny 8 aogositra, hanombohan’ny fampielezan-kevitra, hatramin’ny 22 aogositra, ho avy izao, izay maimaimpoana.Tsiahivina, fa hatao any Ifaty Toliara, ny asabotsy 24 aogositra, ny fifidianana. Tompondaka L’article Kitra – Fifidianana filohan’ny federasiona (FMF): vita ny antsapaka ho an’ireo kandidà 5 mirahalahy a été récupéré chez Newsmada.
Ianabinda Betroka: dahalo iray matin’ny fokonolona
Dahalo miisa enina indray nanafika sy nangalatra omby roa vala tao amin’ny fokontany Fenoarivo, kaominina ambanivohitr’i Ianabinda, distrikan’i Betroka, ny 11 aogositra 2019 misasakalina. Rehefa naheno koika na hazolava (antso vonjy) ny fokonolona iray tanàna dia samy nivoaka ny tranony ka nanao izay ho afany namaly ireo tifitra variraraka nataon’ny dahalo. Resy tosika ireo dahalo ka vaky nandositra niaraka tamin’ny omby miisa 25. Raikitra ny fifanenjehana ka niarafara tamin’ny fifandonana indray izany, dahalo iray lavo ary tafaverina tamin’ny tompony ny omby raha mbola any am-pelatanan’ireo dahalo kosa ny omby miisa 11. Mbola manohy ny fanarahan-dia ireo fokonolona miaraka amin’ny zandary any an-toerana sy ny Usad. Tsapa fa tsy manaiky lembenana amin’ny asa ratsy ataon’ny dahalo intsony ireo vahoaka ao amin’ny distrikan’i Betroka. Manampy mivantana ireo mpitandro filaminana ny fokonolona ary ahitam-bokany toy izao izany.Jean ClaudeL’article Ianabinda Betroka: dahalo iray matin’ny fokonolona a été récupéré chez Newsmada.